iPhone 7, uye kwete 6SE, richava zita reiyo nyowani iPhone, sekureva kwaMacotakara | IPhone nhau
iPhone 7, uye kwete 6SE, richava zita reiyo nyowani iPhone, sekureva kwaMacotakara
2016 haizove gore chairo iro rekufungidzira zita reiyo inotevera iPhone ichave iri nyore. Kubva iyo iPhone 3G, Apple yakaburitsa dhizaini nyowani makore maviri, ichiwedzera zvese zvakakosha mukati meiyo nyowani iPhone. Gore rino, mukati memavhiki matatu, Phill Schiller acharatidza iPhone nyowani, asi nanhasi hatizive kuti iyo nyowani smartphone ichadaidzwa uye zvino mazita maviri anokosheswa: iPhone 7 uye iPhone 6SE.
Dambudziko neiri zita re2016 iPhone ndiko dhizaini. Iyo inotevera iPhone ichave iine yakafanana chimiro uye zviyero se iPhone 6, chishandiso chakapihwa munaGunyana 2014. Misiyano ichave mitsara yeiyo antenna, dhizaini yemakamera ayo asina ring, kana isiri bulge pane iyo imba uye ichave ari maviri mune iyo Plus modhi, uye iyo kusavapo kwechiteshi chemahedhifoni. Vazhinji vanotenda kuti shanduko dzekugadzira idzi hadzina kukwana kuti inotevera iPhone iverengerwe uye vanofunga kuti Apple inosarudza zita racho iPhone 6SE (nekuti iPhone 6ss yaisazotaridzika zvakanaka…) kune yako inotevera smartphone.
Iyo iPhone 7 inosvika nebhatani idzva repamba.
Kuti titore kunze kwekukahadzika, iyo yechiJapanese svikiro Macotakara, uyo akatotipa nhau nezve Apple munguva yakapfuura, dhaiza kuti Tim Cook nekambani havana kuronga kushandura nzira yavanodaidza nharembozha yavo uye kuti inotevera iPhone ichadaidzwa kuti iPhone 7. Macotakara inzvimbo yakatendeka, saka gakava racho rave kupera.
Svikiro reJapan rinotaurawo nezvazvo bhatani bhatani yePhones nyowani, ichitsanangura masosi akavimbika, uye inosimbisa kuti ichave kumanikidza kunzwisisika uye kwete zvemuchina, ndiko kuti, hazvizonyure sepakutanga. Kana runyerekupe rwuri rwechokwadi, bhatani repamba pane iyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus ichafanana neTrippad Force Kubata paMacBook: nenzira yakafanana neiyo 3D Kubata, ichaendesa mhinduro yemuviri kana tatsimbirira zvakakwana kuti tiite imwe yeanotevera.zviito zviripo. Tichazozviona here gore rino kana isu tichaenderera mberi neTouch ID?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » iPhone 7, uye kwete 6SE, richava zita reiyo nyowani iPhone, sekureva kwaMacotakara
Apple Pay inosvika makumi matatu nemanomwe emabhangi eUS nemasangano emari
Vashandisi muJapan, Switzerland neTaiwan vanogona kubhadhara iTunes kutenga kuburikidza nefoni bhiri